Ukwazi ukuthi ungakhetha kanjani phakathi kwamabhithi angama-32 noma angama-64 ukuze usebenze kuWindows | Izindaba zamagajethi
32 noma 64 bit, yikuphi okungcono ukusebenza kuWindows?
Abantu abaningi bafike bazobuza lo mbuzo ngesikhathi esithile ezimpilweni zabo, ngoba bathole umehluko omkhulu ku ukusebenza kahle kwekhompyutha yomuntu siqu neyakho. Ukukhuluma cishe ngama-bits angama-32 noma angama-64 esikhathini esedlule bekungamelela ukuthi kufanele kuphazamiseke ukwakhiwa kwamakhompiyutha akho, into okuso manje okulula kakhulu futhi okulula ukuyiqonda.
Kufanele sisho ukuthi iningi lamakhompyutha siqu kulezi zinsuku usuvele unokwakhiwa okungama-64-bit, okungagcini kuphela kumakhompyutha we-Mac kepha nakulabo lapho sifake khona iWindows; Ngokusebenzisa amathiphu namasu ambalwa, sizophakamisa ukuthi kungani kufanele usebenzise i-32-bit noma i-64-bit computer.
1 Kungani usebenzisa i-32-bit architecture computer?
2 Kungani usebenzisa i-64-bit architecture computer?
3 Umehluko oyisisekelo phakathi kwama-bits angama-32 no-64
4 Ngilukhomba kanjani uhlelo lwama-32 noma lwama-64?
Kungani usebenzisa i-32-bit architecture computer?
Isizathu sokuqala nesiyinhloko sokuthi umuntu aqondiswe sebenzisa ikhompiyutha enezakhiwo ezingama-32-bit kanye nesistimu yokusebenza isezinsizakalweni eziphansi zeqembu; Lokhu kusho ukuthi uma ikhompiyutha yethu (i-laptop noma ideskithophu) ine-RAM encane, inciphise isikhala sediski enzima nezinhlelo zokusebenza ezilula ukusebenza nazo, ngeke idingeke ngale kwalolu hlobo lokwakha.
Uma sikhuluma ngekhompyutha ye-Windows, ukuze uhlelo lokusebenza lusebenze ngempumelelo kulolu hlobo lwekhompyutha (enezingcezu ezingama-32) kuzodingeka okungenani i-1 GB ye-RAM, kunconywa ukuthi ube nokuphindwe kabili. Izicelo esizisebenzisayo kule ndawo yokusebenza kuzodingeka zibe lula futhi ziqonde, noma ngabe uma sizokhetha eyodwa nge-tint yobungcweti (njenge-Adobe Photoshop) kuzofanele sibheke inguqulo ehambisana naleso sakhiwo. Ngeshwa, akuzona zonke izinhlelo zokusebenza ezihambisanayo ezihambisana nama-bits angama-32, okuthile okuzokwazi ukukuqonda uma ngabe ufuna umzuzwana othile faka inguqulo yakamuva ye-Adobe Premiere, ehambisana kuphela namapulatifomu angama-64-bit.
Kungani usebenzisa i-64-bit architecture computer?
Uma sizokwenza umsebenzi okhethekile, lokhu kuzobandakanya ukusetshenziswa kwekhompyutha enezinsizakusebenza ezinkudlwana, ezizomela ngqo i-RAM eningi, isikhala sediski esikhudlwana futhi empeleni, izinhlelo zokusebenza ezinkulu zobungcweti.
Lokhu kungafaka ukufaka imali okwengeziwe kulabo abanekhompyutha engama-64-bit, ngoba uhlelo lokusebenza ngeke lusebenze ngempumelelo uma sine-4 GB ye-RAM kuphela. Okungenani i-8 GB ye-RAM iyadingeka kuwo womabili amaWindows 7 njengenguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza ehlongozwayo yi-Microsoft; Manje, uma sisenokungabaza ngohlobo lwezakhiwo esizisebenzisayo kukhompyutha enezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene esinazo ngalesi sikhathi, khona-ke sizophakamisa izibonelo ezimbalwa ezingokoqobo zomehluko obaluleke kakhulu okhona phakathi kwalezi zingxenyekazi ezimbili.
Umehluko oyisisekelo phakathi kwama-bits angama-32 no-64
Inkumbulo ye-RAM. Ikhompiyutha enezakhiwo ezingama-32-bit ayikwazi ukusebenzisa ngaphezu kwe-4 GB ye-RAM, ngenkathi eyodwa enezingcezu ezingama-64 yephula umgoqo we-8 GB oyisebenzisayo, ihambisana ne-128 GB ye-RAM.
Isistimu Esebenzayonoma. Kwikhompyutha engama-64-bit ungafaka isistimu yokusebenza enezici ezifanayo futhi eyodwa enezingcezu ezingama-32; Isimo esiphikisayo asinakunikezwa, ngoba ikhompyutha engama-32-bit ayikwazi ukufaka isistimu yokusebenza engama-64-bit, kepha eyodwa kuphela engama-32.
Ukuhambisana kohlelo lokusebenza. Izicelo ezihambisana nenye yezakhiwo ezimbili zingaqhutshwa kukhompyutha nohlelo olusebenzayo olungama-64-bit. Izinhlelo zokusebenza ze-Professional 32-bit azikwazi ukwenziwa nganoma yisiphi isikhathi kukhompyutha nohlelo olusebenzayo lwe-64-bit
Ukusebenza kahle. Kwikhompyutha engama-64-bit, kuzoba nokusebenza okungcono komunye umsebenzi, okudlula kude lokho okunganikezwa yikhompyutha engama-32-bit.
Mayelana nento yokugcina esiyishilo, labo abazizwa bejabule kakhulu ekukhetheni ikhompyutha engama-64-bit bangabalandeli bemidlalo yevidiyo, ngoba lezo zinhlelo zokuzijabulisa ziyenziwa futhiBasebenza ngokushelela okubanzi ngokuqhathaniswa nekhompyutha engama-32-bit.
Ngilukhomba kanjani uhlelo lwama-32 noma lwama-64?
Uma sikhuluma ngohlelo sisuke sibhekisa kuyo yonke ikhompyutha nohlelo lwayo lokusebenza olufakiwe; Uma sifuna ukwazi ukwakheka kwekhompyutha yethu, kufanele sizame ukukhomba uhlobo lweprosesa esilufakile kukhompyutha.
Ukuze senze lokhu, kufanele singene kuphela kwi-BIOS bese sesha esikrinini sokuqala ngohlobo lwezakhiwo ezinalo. Khona lapho sizokwaziswa uma sinenye enezingcezu ezingama-32 noma enye enezingcezu ezingama-64 ezandleni zethu.
Uma sinekhompyutha enamaprosesa angama-32-bit, akunakugwenywa sizophoqeleka ukufaka uhlelo lokusebenza lwama-bit-32. Uma kunalokho sine-processor engu-64-bit, kule khompyutha singafaka isistimu yokusebenza engama-32-bit noma ama-64-bit, okuyisici se-hybrid esiphakanyiswe yiMicrosoft yalolu hlobo lwamacala.
Lapho uhlelo lokusebenza lusetshenzisiwe sizoba nethuba lokubuyekeza uhlobo lwenguqulo ye-OS esiyifakile, ngoba kulokhu kufanele faka izakhiwo zeWindows. Isithombe esisibeke engxenyeni engenhla sisikhombisa ngokucacile uhlobo lwesistimu yokusebenza (ingxenye yesoftware) ikhompyutha yethu enayo, njengoba ikhonjwe kahle kuma-bits angama-64. Uma lesi sici sikhona, lapho-ke kufanele siqiniseke ukuthi iprosesa lethu linama-bits angama-64.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » 32 noma 64 bit, yikuphi okungcono ukusebenza kuWindows?
Ukuvela kwesimo se-PES 2015
Ezinye izindlela zokukhipha izinhlelo zeWindows